- Ity andiany ity dia tsy natao hisintonana olona hanaraka ny fantsona fa ho an'i Jesosy, hoy i Per Åkvist.
Sary: izao tontolo izao ankehitriny.
Ny fahombiazan'ny andian-tsarimihetsika Himlen TV7 eo amin'ny seza eo aloha dia teo noho eo.
Nanjary anisan'ny fandaharana voalohany tamin'ny laharam-pahamehana tamin'ny fitoriana filazantsara Himlen TV7 Tao amin'ny seza aloha aho. Hatreto dia programa 22 no voarakitra ary ankoatry ny programa nataoko dia fandaharana iray hafa no naseho. Ao anatin'io fandaharana io dia nadinadinina i Faisal Alami, izay amin'ny pejin'ilay programa dia nofaritana ho " mpanjaka mpifoka rongony tany Lidingö " taloha. Ny fahombiazan'ireo programa ireo dia teo noho eo.
"Ny fandaharana dia efa momba ny olon-drehetra raha ny amin'ny fijerena. Izy io dia momba ilay programa malaza indrindra hatramin'izao, Israel News, izay alefa isan-kariva," hoy i Per Åkvist.
Ny andiany "Eo amin'ny seza eo anoloana" dia novokarin'ny evanjelista fahitalavitra Per Åkvist. Nandritra ny ampahefatry ny ora dia nandeha nitaingina fiara lafo vidy nindrana izy ary niresaka tamin'ny mpandeha iray izay nizara ny fijoroany ho vavolombelona ary nandrisika ny vavaka.
"Tsy maintsy nijanona aho ary nanamaina ny ranomasoko nandritra ny fandraisam-peo. Dia fifaliana lehibe tokoa ny maheno ny olona milaza ny fotoana niovany fiainana niaraka tamin'i Jesosy," hoy i Per Åkvist.
Fandaharana roa no nalefa hatreto
Izao tontolo izao dia manoratra :
Ny vahiny amin'ireo fizarana roa izay efa nalefa hatreto dia ilay bilaogera Christer Åberg sy Faisal Alami, izay ao amin'ny pejin'ilay fandaharana no voalaza fa "mpanjaka mpifoka rongony tany Lidingö" teo aloha.
Faisal Alami | Eo amin'ny seza eo aloha (ilay mpivarotra rongony izay nahita fihavanana tamin'Andriamanitra)
"Faisal no mpanjaka nitondra zava-mahadomelina tao Lidingö ary nanjaka tamim-tahotra izy. Rehefa nanomboka nilatsaka ny fiainana dia nifindra tany amin'ny Mpanjaka Jesosy izy."
Christer Åberg | Eo amin'ny seza eo aloha (Very havana roa very fa nahita lalana miverina amin'ny fifaliana)
"I Jesosy irery no hany mitondra izany. Christer Åberg dia niaina izany tamin'ny alàlan'ny fanamby mafy teo amin'ny fiainana. Bloger i Christer ary mpanoratra ary mitantana apg29.nu, ankoatry ny zavatra hafa."
Fitaovana fitoriana filazantsara
Himlen TV7 dia manantena ny fiangonana sy ny isam-batan'olona handray ny programa ho fitaovana amin'ny fitoriana filazantsara. Amin'izao fotoana izao, ny eritreritra dia mivoatra amin'ny fomba tokony ahafahan'ny mpijery mahazo Baiboly na fitaovana fanaraha-maso hafa, manoratra izao tontolo izao.
Jereo ireo fandaharana ho avy ao amin'ny Himlen TV7 .
Vecka 25, fredag 25 juni 2021 kl. 09:07